လေးဖြူရဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် စီးရီးထဲက သီချင်းလေးတွေ နားဆင်ခံစားနိုင်ဖို့ပါ။ တချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Rocker တစ်ဦးက "သံယောဇဉ်.... သံယောဇဉ်..." ဆိုပြီး ဆွေးပြနေတော့လည်း နားထောင်ရတာ တစ်မျိုး ဖြစ်နေတယ် ထင်တယ်။ သီချင်း အများစုက သီချင်းအေးတွေ ချည်းပဲ ဖြစ်နေတာလည်း သတိထားမိတာတွေ ထဲက တစ်ခုပါ။ ထွက်တဲ့ နေ့မှာပဲ တကမ္ဘာလုံးက ကြိုက်သလောက် Download လုပ်လို့ ရနေတဲ့ အတွက် ခွေရဲ့ ရောင်းအားအပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါမယ်။
အားတဲ့ နားတဲ့ အချိန်လေး နားဆင်ကြရအောင်လား...
Filed Under : Sharing, Song
I found this album selling at the price of S$5 at Panisula plaza. As for me, I downloaded it via link provided by myanmarcupid forum. I think အယင်ကလိုပဲ should be အရင်ကလိုပဲ.
ဟုတ်တယ်ဗျ... အင်တာနက် အသုံးနည်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တော့ S$ 5.00 လည်း ၀ယ်ကြမှာပဲလေဗျာ... ဇီးကွက် စီးပွားရေး အကွက်မြင်တတ်တဲ့ ကိုရွှေမြန်မာများ ပေါ့ဗျာ... :)
my webpage - HTTP://Www.szakibazis.com/blogs/entry/Rent-Villa-In-Moraira-Spain-For-The-Holidays-2013-05-03
presented for your post. They are very convincing and can definitely
work. Still, the posts are very quick for
Also visit my blog :: http://sustainabilitymarket.in/index.php?do=/blog/8290/do-not-put-up-with-pain-in-spain-when-you-need-to-send-a-parcel/add-comment/
My web site :: taohualuck.com
My blog :: Weelove.fr
Here is my site http://plugsocial.com.br/index.php?do=/blog/25381/the-new-hot-classifieds-site-called-mycrazyads-com/
Also visit my website; oakstree.com